Ngesi sizathu izikrini zeGolden Fold zophukile, ngokwe-iFixit | I-Androidsis
Imithombo yeendaba kutshanje yamangaliswa ziingxelo zokuba ukuboniswa okuguqukayo kwezinye zeeyunithi zokuphononongwa kwezinto ezintsha Galaxy Fold Iisamsung zazikho Ukuqhekeka ngokulula.
Ezi ziganeko zikhokelele i-Samsung kwi ukuhlehlisa ukukhutshwa kweFold kwihlabathi jikelele. Ukungaphumeleli kweGold Fold kushiye abanye bezibuza ukuba yintoni engahambanga kakuhle ngesixhobo esihlawuliswe njengefowuni yokuqala yokusonga yorhwebo, ngakumbi kuthathelwa ingqalelo ixabiso lentengo le- $ 2,000 elithweleyo. Ngokunxulumene, IFixit ichaze isizathu sezikrini ezaphukileyo ...
Kwiposti entsha yebhlog, uKevin Purdy kunye namanye amalungu eqela le-iFixit bavavanya imiba eyaziwayo eyabetha abavavanyi ababenethuba lokusebenzisa i-Samsung Galaxy Fold. Iqela lenze uqikelelo olusekwe ngaphezulu kweshumi leminyaka kuvavanyo lwangaphakathi lwezixhobo ezisebenzisa iiphaneli eziguquguqukayo ze-AMOLED ezifanayo nale ikule terminal. (Jonga ⇒ I-Galaxy Fold vs Huawei Mate X: iikhonsepthi ezimbini ezahlukeneyo zenjongo enye)
Isikrini esaphukileyo seGalaxy Fold
Ngamafutshane, iposti ibonisa ukuba Isikrini se-OLED sisentliziyo yeengxaki zeGalaxy Fold, ngakumbi kuba ayinangqimba yokukhusela njengeGorilla Glass ngaphezulu. Ukuboniswa kwe-OLED kuthiwa kubuthathaka kakhulu, kungoko nezona zinto zincinci zothuli zinokubangela iingxaki, kwaye isongelo lineendawo ezininzi apho uthuli lunokungena ngokulula kwiindawo ezibuthathaka.
Kwimeko apho ubungazi: Iiphaneli ze-AMOLED zisekwe kwitekhnoloji ye-OLED. Banamancedo amaninzi ngaphezulu kwezikrini ze-LCD eziqhelekileyo: basebenza ngaphandle kwesibane esingasemva, banamandla ngakumbi kwaye bayasebenza, kwaye banokwenza imibala eqaqambileyo.
Ngamanye amaxesha, ifilimu ekhuselayo kwi-OLED yayihluthwe kulindeleke ukuba ifane nefilimu encinci, ekhutshiweyo engenamanzi ehambisa iifowuni ezininzi. Okonakalise isikrini se-OLED kunye nokuqaqambisa oko Uxinzelelo olunamandla kolu hlobo lwepaneli engakhuselekanga luyingozi.
Phambi kokumiliselwa kweGolden Fold, iSamsung yazisa ngovavanyo olupapashiweyo loxinzelelo lwesixhobo, apho iifolda zerobhothi zazibeka khona iindlela zokusonga kwiifolda ezahlukeneyo. IFixit inoluvo lokuba iimvavanyo bezinoomatshini kakhulu kwaye khange zithathele ingqalelo ngenxa yokuba ukusetyenziswa kwabantu kuyahluka.
Yintoni i-Samsung efuna ukuyitshintsha kwi-Galaxy Fold?
Okokugqibela, iqela le-iFixit likwakhankanye ukuba ukunqongophala komgca wokuzinikezela kumbindi wesikrini sokusonga kuthintela ukuba ungasongeli rhoqo, ubeke uxinzelelo ngakumbi kwipaneli ye-OLED.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ngesi sizathu izikrini zeGolden Fold zophukile, ngokwe-iFixit